खण्ड गर्न आन्दोलन !
अखण्ड राख्न आन्दोलन !
जाती, क्षेत्र, धर्म आदिका नाउँमा आन्दोलन !
संविधानमा सबैको माग समेट्न आन्दोलन, यसको नि पुरा हुनुपर्यो, उसको नि पुरा हुनुपर्यो ! सबैको समस्याको समाधान कसरी संविधानले दे'ला?
अझ अर्को कुरा, यो नमिलेर र त्यो नमिलेर संविधान नबनेको भनिएको वर्षौँ भइसक्यो, अघिल्लो पटक'को संविधान सभा यही संघियताकै कुरो नमिलेर, खत्तम भयो । घोषणा गरिसकिएको प्रदेशहरुकै पनि भविष्यको योजना छैन, विकास निर्माण कसरी के गर्ने थाहा छैन, जनताको जिवनस्तर कसरी उकासिन्छ केही अनुसन्धान भएजस्तो लाग्दैन । संघियता भइसकेपछि सबै आफैँ ठिक हुन्छ भने जस्तो हिसाबले मात्र कुरा भइरहेकोछ।
हालैका महिनाहरुमा आफू घरमा 'अनप्रडक्टिभ' भएको आभास भइरहेकोछ । कामहरु गर्छु भनेर थाती राखेको महिनौँ भइसक्यो । अफिसबाट घर फर्केपछि, घरमा बिताइने समयमा कसरी 'प्रडक्टिभ' बन्न सकिएला भनेर घोत्लिदाँ अनेक समस्याहरु देखिए, मलाई लाग्यो ती समस्याहरु समाधान भयो भने त म 'प्रडक्टिभ' भइहाल्छु । मैले धेरैपटक धेरैलाई भनेको पनि थिँए, घरमा आयो बत्ति हुन्न, बत्ति भएको बेला इन्टरनेट हुन्न, इन्टरनेट भएकोबेला फेसबुक, ट्विटर चलाउँदैमा फूर्सद हुन्न आदि इत्यादी । मैले जुन समस्या हुन् भनेर सोचेको थिँए, सायद ती आफैँमा समस्या थिएनन्, सायद म आफू बहाना बनाइरहेकोथिँए, भोलि भोलि भन्दै आफू अल्छि बनिरहेकोथिँए । हुन त अफिसबाट थकित नै भएर घर आइएको हुन्छ, तर घर आएर गर्न सकिने कामहरु पनि विभिन्न बहाना बनाएर पछाडी नै धकेलिन्छ ।
अफिसमा ८ घन्टा काम गरेर घर आयो, घर आउँदा बत्ति हुन्न, कस्तो काम गर्ने जोशले घर आइएको हुन्थ्यो तर बत्ति नहुँदा खिन्न भइन्थ्यो । लौ अब भोलि काम गरुँला भनेर मन बुझाइन्थ्यो । बत्ति आइरहेकोबेला, कहिलेकाँही मुड चल्थ्यो, कम्प्युटर अन गर्यो, कम्प्युटर नै स्लो लाग्थ्यो, कम्प्युटर अलिक चलेजस्तो लाग्दा, इन्टरनेट स्लो लाग्थ्यो । जब बत्ति, कम्प्युटर, इन्टरनेट सबैको अवस्था ठिकठाक हुन्थ्यो, बस्ने ठाउँ नमिलेको जस्तो लाग्थ्यो, घरमा कम्प्युटर चलाउने सँधै एउटा कुनो, मलाई काम गर्न समस्या नै समस्या भएजस्तो लाग्थ्यो, त्यही नि कहिलेकाँही अपर्रझट गर्नुपर्ने काम गरिन्थ्यो, कतिपय काम भोलि भोलि भन्दै साँचिराखिन्थ्यो ।
मलाई लाग्यो समस्या म'मा हैन, मेरो वरिपरि छ । यदि मेरो इन्टरनेट राम्रो हुने हो, लोडसेडिङ नहुने हो, कम्प्युटर गज्जबले चल्ने हो भने त काम गरिहाल्थेँ नि, 'प्रडक्टिभ' भइहाल्थेँ नि भन्ने कुराले धेरै महिनासम्म डेरा जमायो । अनि त झन् आज गर्नसक्ने कुरो पनि, इन्टरनेट राम्रो नभएर पो त, बत्ति नभएर पो त नभए गरिहाल्थेँ भनेजस्तो लाग्यो । अत: मलाई काम गर्न वाधा पारिरहेका कुराहरु (जुन मैले सोचेको थिँए) समाधान गर्नतर्फ लागेँ ।
पहिलो कुरो त लोडसेडिङ, अफिसबाट घर आइपुग्दा, घर अन्धकार देख्दा केही गर्नै मन नलाग्ने हुन्थ्यो, लाग्यो यो पहिलो कुरो समाधान गरियो भने, मेरो लगभग सबैकुरा समाधान हुन्छ । इन्भर्टर राख्यो भने, ल्यापटप चार्ज गर्न पनि भयो, इन्टरनेटमा पनि समस्या नहुने । यही सोचेर फ्ल्याटमा एउटा इन्भर्टर राखियो, बत्ति र इन्टरनेट राउटरको लागि, ईमरजेन्सी परेको बखत ल्यापटप र फोन पनि चार्ज गर्न मिल्ने ।
इन्भर्टर राखियो तर मेरो समस्या ज्युँ'का त्युँ रह्यो । मलाई किन किन, ईन्टरनेटको ब्यान्डविड्थमा समस्या लाग्यो, ईन्टरनेट अलि तुफान चल्ने भए'पो मैले काम सजिलो सँग गर्न सक्थेँ । ईन्भर्टर छ, तर ईन्टरनेट राम्रो छैन, आज गर्नुपर्ने काम, भोलि - भोलि भन्न यत्ति काफी थियो । केही महिना यस्तैसँगले बिताइयो । धेरै महिना सोचेर, वायरलेस ब्रोडब्यान्ड छाडेर, फाइबर इन्टरनेट लिने निर्णय गरियो, यो आशामा कि म फाइबर इन्टरनेट जोडिएको दिनदेखि 'प्रडक्टिभ' भइहाल्छु भनेर । फाइबर इन्टरनेट पनि जोडियो, अझै काम गर्ने जाँगर चलेन, म त अझ समस्या देख्दैथिँए। मेरो ल्यापटप मेरो लागि समस्या भएर खडा भयो, हुन त ल्यापटपको सट्टमा 'ट्याब' नै लिएको थिँए, जहाँ पनि बोकेर सजिलै जानमिल्ने, केही कामहरु ट्याबबाटै पनि गर्न सकिन्छ भनेर, तर जे सोचेर ट्याब लिइएको थियो, त्यही अनुसारको काम गरिएन । बरु अंग्रेजी सिरिज र सयौँ मुभीहरु सुतेर हेरियो, ट्याबमै । टेबल कुर्सी, बत्ति, ईन्टरनेट सबै भयो तर ल्यापटप भएन भन्ने लाग्यो, ल्यापटप भए त गरिहाल्थेँ नि भन्या जस्तो लाग्यो । काम नगरिएको बहाना खोज्दै खोज्दै नयाँ ल्यापटप पनि किनियो ।
साथमा नयाँ ल्यापटप हुँदा पनि, जुन आफूले गर्छु भनेर सोचिएको थियो, त्यो गरिएन । बत्ति, ईन्टरनेट, ल्यापटप सबै भयो, अब आफूलाई टेबल र कुर्सीमा समस्या लाग्नथाल्यो । यी सबै कुराहरु भएपछि, म 'प्रडक्टिभ' भइहाल्छु भन्ने लागेको थियो, तर घर आइपुगेपछि त्यही टेबल र कुर्सी समस्या'का रुपमा खडा भए । मैले अर्को फरक किसिमको कुर्सी लिने, अर्को टेबल लिने विचार गरेँ, विचार गर्नुमात्रै के थियो, नयाँ किसिमको कुर्सी पनि लिँए । तर यसले नि मलाई कुनै फलिफाप भएन, पहिले जस्तो थिँए, त्यस्तै नै भएँ, फरक यत्ति थियो बत्ति जाँदैनथियो, ईन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ राम्रो थियो, नयाँ ल्यापटप थियो, १०-११ घन्टा सजिलै ब्याट्रि टिक्थ्यो, नयाँ प्रकारको कुर्सी थियो । मैले औँल्याएको सबै समस्या समाधान भइसक्दा पनि आफ्नो 'प्रडक्टिभिटि'मा चाँहि 'वाट्' नै लागिरहेकोथियो । केही गर्छु भन्दा भन्दै पनि, भोलि भोलि भनेर टार्दै गइएको थियो । सायद मैले आफ्नो समस्या के हो भनेर बुझेकै थिइन । कहिलेकाँही आफ्नो समस्या के हो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नजान्दा, आफ्नो लक्ष्य के हो भनेर हेक्का नराख्दा, भोलि भोलि भनेर काम साँचिने रहेछ । यो भए यसो गर्थेँ, त्यो भए यसो हुन्थ्यो भन्ने फगत कल्पना मात्रै हुने रहेछन् ।
ईन्टरनेटमा डुल्दै गर्दा केही समय अघि पढिएको 'प्रडक्टिभिटि' सम्बन्धी लेखले चाँहि नराम्रो सँग घच्घच्यायो । म जे कुरा मेरा समस्या हुन् भनेर भनिरहेको थिँए, खासमा ती समस्या भन्दा पनि बहाना मात्रै थिए । उक्त लेख पढेपछि चाँहि नियमित केही न केही काम गरिरहेकोछु, (के/कसरी/कस्तो 'प्रडक्टिभिटी' भनेर पछि लेखौँला) । ट्विटरको फिडमा, अखण्ड भन्दै चलेको आन्दोलनमा आज २ जनाले ज्यान गुमाइसके भन्ने खबर पढियो। अनि खण्ड र अखण्डका लागि चलिरहेको आन्दोलन, धर्म र जातिय प्रदेशका लागि चलिरहेका आन्दोलन आदिले, त्यही 'समस्या र प्रडक्टिभिटी'का कुराहरु 'दिमाग'मा ठोक्किन आइपुग्यो । हामीलाई संविधान बनेपछि सबै समाधान हुन्छ, संविधान नभएर पो त विकास नभएको, संविधान नभएर पो त फलानो जात पछि परेको, संविधान नबनेर पो त फलानाको राज्यमा पहुँच नपुगेको, अधिकार नपाइएको आदि इत्यादी भन्ने लागेको छ, तर ती फगत बहानाहरु मात्रै हुन् । एउटा जिल्ला त के, एउटा वडा पनि नमुना वडा भनेर बनाइएको छैन । प्लानिङ केही छैन । खै के, खै के !